वाम सरकारकाे समाजवाद उन्मुख बजेटमा समेटियाे यस्ता कार्यक्रम
बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा
काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि समाजवाद उन्मुख उद्देश्यसहितको बजेट प्रस्तुत गरेको छ ।
संघीय संसद्को आज बसेको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले गरिबी र पछौटेपनको अन्त्य गर्दै संविधानमा उल्लेख गरिएका नागरिकको मौलिक हकलाई सुरक्षित हुने गरी बजेट तयार गरिएको जानकारी दिए ।
शिक्षा विज्ञान प्रविधिको क्षेत्रमा रु एक खर्ब ३४ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
यस्तै विद्यार्थीलाई पाँच प्रतिशत व्याजमा रु. सात लाखसम्मको शैक्षिक ऋण दिने कार्यक्रम समेत बजेटमा समावेश छ ।